University of Zimbabwe negotiates partnership agreement with Heber Biotec
On Saturday, September 9, a delegation of 3 specialists from the University of Zimbabwe came to Cuba to negotiate a collaboration agreement with Heber Biotec on the manufacture of medicines. The visit, which runs until September 15, will also assess how to introduce these products in Zimbabwe.
Cuban Minister of Education meets with Cuban doctors in Zimbabwe.
The Cuban Minister of Education, Dr. Ena Elsa Velázquez Cobiella, met today with a representation of Cuban collaborators in Zimbabwe,
Cuba and Zimbabwe discuss ways of cooperation in education
The Minister of Primary and Secondary Education of Zimbabwe, Dr. Lazarus Dokora and the Minister of Education of Cuba Dr. Ena Elsa Velázquez analyzed new avenues of cooperation in the area of education.
Cuba presented its advances in the field of biotechnology, based on the importance that the government of the island has given to this area, which has resulted in the creation of a large group of products destined for human health, as well as achievements in animal health and food production.
Cuban Minister of Education arrives in Zimbabwe
Cuban Minister of Education Dr. Ena Elsa Velázquez Cobiella, arrived in Harare, the capital of Zimbabwe, invited by her Zimbabwean counterpart Dr. Lazarus Dokora, to participate in the 3rd International Education Conference in this city, which will take place between the 30 August and September 1, 2017